Akụkọ - Ụdị igwekota igwe ihe
Ụdị igwe ịsa igwe
Enwere nnukwu ihe dị iche n'etiti a pọmpụ ịsa ahụ na -arụ ọrụ nke ọma yana ọkpọ mmiri ịsa ahụ nwere arụmọrụ adịghị mma. Maka igwe ịsa ahụ nwere arụmọrụ dị mma, mmetụta ịchekwa mmiri ya dị mma nke ukwuu, ọbụlagodi na agbanwuru ma gbanyụọ ya ugboro 100000, ọ gaghị ada, nke nwere ike ịchekwa nnukwu mmiri. Yabụ na ọ kacha mma ịhọrọ igwe mmiri ịsa ahụ ọgbara ọhụrụ.
N'ịkwasa ịsa ahụ, anyị nwere nghọta siri ike banyere ihe mejupụtara ya. N'agbanyeghị akụkụ bụ akụkụ dị mkpa nkeịsa, ọ na -arụ ọrụ a na -apụghị ịgbagha agbagha na ọrụ ịsa ahụ kwa ụbọchị.Mmiri ịsa ahụ n'ime ezinụlọ na -enwekarị ụdị ụzọ ọpụpụ mmiri. Enweghị njikwa nke isi mmiri pọmpụ ahụ, ọ gaghị ekwe omume ịghọta ọwa mmiri wee gbanwee ụdị ụzọ ọpụpụ mmiri. Ọ dị ezigbo mkpa ịhọrọ onye ndu nwere ihe siri ike yana teknụzụ dị elu.
Igwe mmiri ịsa ahụ katrij dị iche, ọrụ dị iche, e nwere ụdị ọkpọ mmiri atọ katrij n'ahịa, ha bụ seramiiki diski valvụ isi, valvụ bọọlụ igwe anaghị agba nchara na ụdị valvụ mpịakọta, nke ọnụahịa nke seramiiki diski valve dị ntakịrị, mmetọ ahụ pere mpe, mana ọ dị mfe imebi; valvụ bọọlụ igwe anaghị agba nchara, nwere ọdịnaya teknụzụ dị elu, nwere ike ịchịkwa oke mmiri, nwere ike ịchekwa ume na mmiri; Ụdị mpịakọta mpịakọta, dị mfe ịrụ ọrụ, ọkachasị ntụgharị dị mma, mana nwekwara njiri mara ịka nká na mgbochi na -eyi.
Automatic okpomọkụ mgbe niile ịsa’s agwakọta valvụ nwere ọrụ nke na -akpaghị aka mgbe niile mmiri okpomọkụ. Mgbe etinyere okpomoku mmiri dị ka mkpa ndị dị adị si dị, okpomọkụ mmiri ọpụpụ nwere ike iru ngwa ngwa yana na -akpaghị aka, nke na -adịghị emetụta mgbanwe nke nrụgide mbata mmiri oyi na mmiri ọkụ, ọnọdụ okpomọkụ ma ọ bụ ọpụpụ mmiri, ka ọ nwee ike idozi. nsogbu nke oyi oyi na mmiri ọkụ dị ọkụ na usoro ịsa ahụ. Mgbe nrụgide mbata, ọnọdụ okpomọkụ ma ọ bụ mpụta mmiri oyi na mmiri ọkụ gbanwere, mgbanwe nke oke ọpụpụ dị n'ime± 2 ℃.Ọzọkwa, valvụ agwakọtara mmiri thermostatic nwere ọrụ nke igbochi ikpo ọkụ na ujo oyi. N'ime usoro ịsa ahụ, mgbe a kwụsịrị mmiri oyi na mberede, valvụ agwakọta mmiri nwere ike mechie mmiri ọkụ na -akpaghị aka n'ime sekọnd ole na ole, nke na -arụ ọrụ nchekwa nchekwa megide ịchacha ọkụ; mgbe a kwụsịrị mmiri ọkụ na mberede, valvụ agwakọta mmiri thermostatic nwere ike mechie mmiri oyi na -akpaghị aka n'ime sekọnd ole na ole, nke na -arụ ọrụ nke nchekwa nchekwa megide ujo oyi.
Họrọ nke ọma isi ịsa ahụ, bụ mmalite ịsa ahụ mara mma, họrọ nke dabara nke ọma maka isi ịsa ahụ nke ha na nke dị elu.